Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhaalibaan oo Doortay Hogaamiye Cusub.
Ururka Dhaalibaan oo Doortay Hogaamiye Cusub.
Ururka Dhaalibaan Afghanistan, ayaa sheegaya inay magacaawdeen hoggaamiye cusub, maalmo kaddib markii Mullah Akhtar Mansour ay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ku dileen Pakistan.
Afhayeen u hadlay Taliban, ayaa ku sheegay nin lagu magacaabo, Haibatullah Akhundzada, inuu yahay madaxa cusub ee ururka. Mullah Haibatullah, ayaa ahaa ku xigeenkii Mullah Mansour iyo madaxii hore ee garsoorka Taliban.
Ku xigeenada cusub, ayaa noqon doono, Sirajuddin Haqqani oo shabakadiisa lagu dhaliilay qaraxyo badan oo ka dhacay Kabul iyo Mohammad Yaqoob oo ah wiilka asaasihii Taliban, Mullah Omar. Waa markii ugu horeysay ay Taliban qirto dhimashada Mullah Mansour.
Wax yar ayaa laga ogyahay halka uu ku hagi doono ururka, balse dadka arrimahaas ka faalooda waxay sheegayaan in aan laysku khilaafin xulistiisa. Sanadkii tagay ayey Taliban jahawareer galeen, markii Mansour lagu badalay asaasihii Taliban Mullah Mohammad Omar.